Malunga nathi -Dongguan Sheerfond New Material Co., Ltd
I-Dongguan Sheerfond New Material Co, Ltd ijolise kuphuhliso kunye nemveliso yeemveliso ezintsha. Ezona mveliso ziphambili zizinto zegraphene kunye neemveliso zesicelo, iiofisi kunye neemveliso zasekhaya, kunye nezipho. Injongo yethu "itekhnoloji yobomi". Izinto eziluncedo kuthi:
1. Ukuphuculwa kobuchule bemveliso: ukusuka kuphuhliso lwezinto ezibonakalayo, uyilo lwembonakalo, uyilo lwendlela, ukuphuculwa komngundo, uyilo lweemveliso kunye nophuhliso, jika izimvo zakho zibe yimveliso elungileyo kwaye ufeze amaphupha akho.
2. Umthamo wemveliso onamandla: Umthamo wemveliso yenyanga ufikelela kwiiyunithi zemilion ezili-100.
3. Ulawulo lomgangatho olungqongqo: ukusuka ekusekweni kwemigangatho yovavanyo, uhlolo lwezinto ezingenayo, inkqubo yolawulo lwemveliso, kunye nohlolo oluphumayo, 100% uhlolo luyenziwa ukuqinisekisa ukuba yonke imveliso efunyanwa ngumthengi iyimveliso efanelekileyo.
4. Ukwanelisa inkonzo yabathengi, iimfuno zabathengi ziimfuno zethu, inkonzo elungileyo yabathengi luxanduva lwethu, nokuba kukuphuhliswa kwemveliso, umgangatho wemveliso, iiodolo kunye neminye imiba, nceda usixelele okokuqala, siya kuhlala sisebenza ukufikelela kuwe Ukoneliseka. 5. Ixabiso elingenaxabiso, siyifektri, sifuna kuphela inzuzo efanelekileyo, vumela iimveliso zethu zibe nexabiso elininzi kwintengiso, zithengise ngaphezulu, amaqabane am kwaye siya kuba nempumelelo.
Ukujongana namaqabane amaninzi eshishini, sikhetha njani? Kufuneka sikhethe amaqabane oshishino ahlala esenza izinto ezintsha, esenza inkqubela phambili, kwaye esizisa rhoqo iimveliso ezintsha kunye neenkonzo kubathengi, ukuze sikwazi ukuqhubela phambili kwaye sikhule kunye. ujonge phambili kulwazi lwakho.
Zintathu iindlela zokusebenzisana:
1. Abathengi babeka phambili iimfuno, izimvo ezilungileyo, siya kudala iimveliso ezilungileyo.
2. Abathengi bazilungiselela iimveliso esele zikhona kwaye benze ngokwezifiso iimveliso eziveliswe ngobuninzi ukuhlangabezana ngokukhawuleza neemfuno zabathengi.
3. Kufuneka ufumane iqabane lengingqi. Ndiyathemba ukuba ungasebenza nathi kwindawo oyikhethayo, ukwenza imakethi ibe nkulu kwaye ikude, kwaye ukhusele indawo ekhethiweyo. Nguwe kuphela onokukhetha kuthi.